सोसल मिडियामा आफुलाई चिनाउनु भन्दा पनि आफ्नो कुरालाई चिनाउनु महत्वपूर्ण ठान्दछु : अंकित आचार्य - MeroReport
सोसल मिडियामा आफुलाई चिनाउनु भन्दा पनि आफ्नो कुरालाई चिनाउनु महत्वपूर्ण ठान्दछु : अंकित आचार्य
कम्प्युटर ईन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका अंकित आचार्यलाई साथीहरुसँग भेटघाट गर्न र घुमफिर गर्न खुबै मनपर्छ । साथीहरुको सल्लाहले ब्लग लेख्न थालेको बताउने आचार्यको अर्को रुचिको विषय भनेको उपन्यास पढ्नु पनि हो । फुर्सदको समयमा अरुका ब्लग पढ्न रमाउने आचार्य आफु पनि ब्लग लेखनमा उत्तिकै सक्रिय छन् । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै अंकित आचार्यसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
तपाँई आफूलाई अरुमाझ कसरी चिनाउनुहुन्छ?
यसरी आफ्नो परिचय अरुलाई अहिलेसम्म दिनुपरेको थिएन। तरपनि भन्नु पर्दा किताब पढ्न रुचाउने, घुमफिरमा रमाउने र आफ्नो भित्री उद्येश्यको खोजीमा रहेको व्यक्ति हुँ।
सोसल मिडियामा चाहिँ आफूलाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ?
सोसल मिडियामा आफुलाई चिनाउनु भन्दा पनि आफ्नो कुरालाई चिनाउनु महत्वपूर्ण ठान्दछु। त्यसैले अरुले मलाई नामले भन्दा विचारले चिनुन् जस्तो लाग्छ।
ब्लगिङ शुरु गरेको भर्खर ६-७ महिना मात्र भएको छ। मनका कुरा अरुसँग बोलेर गर्नु भन्दा लेखेर ब्यक्त गर्न मलाई सजिलो लाग्छ।
के का लागि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ ? ब्लगिङ गर्न कत्तिको सजिलो छ ?
आफ्नो मनमा लागेको कुरा जहिले पनि कसैसँग आमुन्ने सामुन्ने गर्न सकिन्न। अनि फेरी म मान्छे पनि अलि अप्ठ्यारो छु। मनमा भएका कुरा ब्लगमा राख्दा सजिलो लाग्छ। मेरो लेखन शैली राम्रो छ भनेर पनि साथीहरुले धेरै भनेका थिए। फुर्सदको बेलामा केहि शब्दहरु जोडेर एउटा लेख बनाउदा आफुलाई पनि खुशी लाग्छ।
मेरो अनुभवमा ब्लग शुरु गर्न सजिलो छ, तर त्यसलाई निरन्तरता दिन भने गाह्रो छ। कहिले समय नमिल्ने, कहिले इन्टरनेटले धोका दिने, र कहिले भने आफैलाई कुरा नआउने चुनौतिहरु आईपर्छन्। सबै मिलेको बेला मात्र ब्लग रमाइलो हुन्छ।
आफ्नो ब्लगमा आफ्नो मनमा लागेका कुरा नै राखिन्छ। तर कहिलेकहिँ घुमफिरको अनुभवलाई पनि प्रस्तुत गरिन्छ । त्यसैले ब्लगमा सबैको मिश्रीत रुप दिन खोज्दै गएको छु। प्राथमिकता भने त्यति साह्रो दिएको छैन, टाइप गर्दै जाँदा जे मनमा आयो, त्यही लेखिन्छ।
तपाँईले https://awkwardandmodest.wordpress.com/ बाहेक अरु पनि ब्लग चलाउनु हुन्छ ? अनि आफ्नो ब्लगको नाम कसरी राख्नु भयो बारे बताईदिनुस न ?
कहिलेकाहिँ https://chetansheelyuwa.wordpress.com/ मा पनि लेख्ने गरेको छु। ब्लगको नाम चाहिँ मेरो बानि ब्यहोरा साथीहरुका अनुसार अफ्ठेरो (awkward) र साधारण (modest) शब्दहरुले चिनाउने भएकोले पनि त्यही हुन गयो।
अनि नेपाली ब्लगिङको प्रयोगलाइ कसरी हेरिरहनुभएको छ, सदुपयोग या दुरुपयोग?
सदुपयोग नै धेरै छन्। ब्लग विद्यार्थीहरु देखि आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल व्यक्तिहरुले आफ्नो आवाज सबैसम्म पुर्याउने सजिलो माध्यम हो। दुरुपयोग भएको भने थाहा छैन।
पढ्छु, निकै रमाइलो लाग्छ। आफ्नो कुरा अरुसँग मिल्न गएमा अझै राम्रो। विषयबस्तु भने बौद्धिक र दार्शनिक भयो भने पढ्न झनै राम्रो लाग्छ ।
नेपाली ब्लगहरु सामाजिक हितमा लेखिएका कत्तिको पाउनु भएको छ? नेपालमा सोसल मिडियाको प्रयोग चै कस्तो भइरहेको पाउनुभएको छ?
नेपाली ब्लगहरु धेरै देख्न थालेको भनेको टुइटर चलाउन थालेपछि हो। मेरो सामु परेको ब्लगहरुले राजनीतिक ब्यङ्ग देखि सामान्य चिन्तन-मनन गरेको सम्म देखेको छु। उनीहरुको ब्लगमा भेटघाट कार्यक्रम देखि लिएर आफ्नो कामलाई प्रोत्साहन गरेको लेख देख्दा खुशी लाग्छ। सोसल मिडिया भने खाली टुइटर मात्र प्रयोग गर्ने भएकोले ठिकै लाग्छ।
जरुरी छ। ब्लग शुरु गर्नु को मुख्य उद्येश्य नै आफ्नो बिचार, बिना कुनै अड्चन, राख्नु हो। आचारसंहिता लगाए सबैलाई एउटा दिशातिर जान धकेले सृजनशिलतालाई हानी पुग्छ, तर शुरु गर्न सजिलो हुने र थाहा नभएकालाई बाटो देखाउन सके भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
पालना भएको नभएको भन्दा पनि केका लागि प्रयोग गरेकोमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ। आफुलाई राम्रो लागेको ब्लग अरु साथिहरुसंग शेयर गरिन्छ, नराम्रोलाई वास्ता गरिन्न।
तपाँई त फेसबुकमा हुनुहुँदोरहेनछ, केही विशेष कारण छ कि ?
खासै विशेष कारण केहि हैन। म फेसबुकमा छैन, टुइटर मात्र प्रयोग गर्छु। फेसबुक भन्दा टुइटर ठिक लाग्छ । किनभने आफन्त भन्दा आफ्नो सोच मिल्ने धेरै व्यक्तिसँग भेटघाट गर्न पाईन्छ। ब्लग भने आफ्नो मात्र हो। कसैको सोच त्यस्मा प्रतिबिम्ब भएको पाइन्न। आफ्नो भित्री मनको कुरा स्पष्टसँग अरु सामुन्ने राख्न सकिन्छ।
ब्लगिङलाई केहीले नागरिक पत्रकारिता पनि भन्ने गरेको पाइन्छ, के ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिता नै हो त ?
नागरिक पत्रकारिता नै हो । आफ्नो सानो-सानो उपलब्धिलाई अरु सामु राख्न सकिन्छ । त्यसले त्यो सानो उपलब्धि पनि ठुलो लाग्छ। आफ्नो खुशी जति बाँड्यो, उति बढ्छ। ब्लगिङले त्यसैको काम गरिरहेको छ।
Comment by Amuna Chapagain on November 27, 2014 at 3:06pm
Congratulations Ankeet Jee !